१६ खर्बको रेसियोमा बजेट आउने तयारी, कोरोना केन्द्रीत होला कि ? परम्परागत ? ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । सरकारले करिव १६ खर्बको बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउन व्यस्त छ । उता संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्रालय त्यसकै आसपासमा बजेट ल्याउने तयारी गर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसैगरी, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरण, उत्पादनशीला रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धनमा समितिले जोड दिइएको छ ।
कृषि उपज ढुवानीमा अवरोध नगर्न सरकारको अनुरोध
राष्ट्र बैंकद्धारा सहुलीयत कर्जा (पुनरकर्जा) वितरणको मस्यौदा तयार (पूर्ण पाठसहित)